Uyicwangcisa njani i-Pin yeSms kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 376
Umsebenzisi we-Twitter unokukhetha setha iPIN yeSMS; Ukulungiselela le njongo, kuya kufuneka ulandele le nkqubo: Okokuqala, kufuneka uqiniseke ukuba isixhobo sakho esiphathwayo sixhunyiwe kwiakhawunti yakho ye-Twitter.
Emva koko, uMsebenzisi ungena kwiakhawunti yakhe ye-Twitter kwiwebhu kwaye ubekwe kuyo Uqwalaselo lweselfowuni; Faka i-PIN oyifunayo, ekufuneka ibe noonobumba abane be-alphanumeric, kwaye uye emazantsi ephepha, cofa Gcina utshintsho.
Ukuba I-PIN yomsebenzisi, umyalezo wokuqinisekisa uza kuvela. Ukuba uMsebenzisi usebenze iPIN kwiAkhawunti yakhe, kufuneka ayifake ngaphambi kokubhaliweyo kweTwitter okanye umyalelo weSMS awuthumela kwikhowudi yakhe emfutshane ye-Twitter.
Guqula okanye ucime iPIN kwi-Twitter
I-PIN linombolo yokuzazisa enokuthi uMsebenzisi ayisebenzise kuyo ukuqinisekisa ukhuseleko kwiakhawunti yakho ye-Twitter. NgePIN ungongeza isimaphambili kuhlaziyo lwakho nakwimiyalelo yeselfowuni.
Umsebenzisi, kube kanye isebenze iPIN yakho Kwiakhawunti yakho ye-Twitter, unokukhetha ukuguqula okanye ukucima iPIN. Ngale ndlela, ifuna ukuya kuQwalaselo lwezixhobo eziphathwayo; Kanye apho, indawo ye-PIN ikhoyo.
Kwintsimi yePIN, uMsebenzisi ufumana Guqula okanye ucime iPIN yakho ngandlela-nye. Ukulungiselela le njongo, kufuneka uskrolele emazantsi ephepha kwaye uqhubeke nokukhetha Gcina utshintsho, cofa.
YENZA IIVIDIYO EBukhoma KWITITTER
Kwiqonga le-Twitter, uMsebenzisi unethuba lokwenza njalo yenza iiVidiyo eziBukhoma kwaye wabelane ngokwenzekayo ngexesha lokwenyani. I-Twitter yindawo efanelekileyo yokufumana ulwazi nasiphi na isihloko sehlabathi.
Ukuze umsebenzisi we-Twitter enze iVidiyo ebukhoma, kufuneka wenze oku kulandelayo: Cofa kwiBhokisi yeTwitter; cofa u-Live kwisikhethi esisezantsi; usasaze ngqo, Unokhetho lokucima ikhamera kwaye uthathe inxaxheba kuphela ngesandi, apha cofa kwimakrofoni.
Okulandelayo, uMsebenzisi ucofa ukuHambisa uBukhoma; unako phelisa ividiyo yakho ebukhoma Ngalo naliphi na ixesha, cofa kwi-Stop phezulu ngasekhohlo kwaye uqinisekise ukhetho lwakho kwimenyu eboniswayo.
Vumela ababukeli ukuba bacele ukujoyina uMsinga wam we-Twitter
Umsebenzisi we-Twitter unokhetho lokuvumela ababukeli ukuba bacele Joyina uMsinga wakhoKufuneka uthobele le nkqubo kuphela: Cofa kwibhokisi yeTwitter; Cofa u-Live emazantsi ebhokisi.
Cofa kwi icon ekhoneni eliphezulu lasekunene ukwenza kube lula kubasebenzisi Ababukeli ngoku, Isicelo sokujoyina ukuHanjiswa koMsebenzisi; Cofa kwi-Broadcast bukhoma ukuqala usasazo lwakho kwinethiwekhi yoluntu iTwitter.
Xa umsebenzisi we-Twitter Isicelo sokujoyina Ukuhanjiswa komsebenzisi, kuya kuvela isaziso kwincoko; Cofa kwi icon ukuyongeza. Ukuba uthatha isigqibo sokususa undwendwe, cofa u-X ngasekunene kwe-avatar yabo.
1 Guqula okanye ucime iPIN kwi-Twitter
2 YENZA IIVIDIYO EBukhoma KWITITTER
3 Vumela ababukeli ukuba bacele ukujoyina uMsinga wam we-Twitter